यस वर्ष सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान – Satyapati
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान गरेकाे छ ।
आज शुक्रवार काठमाण्डाैमा आयोजित मनसुन सिजनको हावापानी आँकलन कार्यक्रममा विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान गरिएकाे जनाएको हो ।
विभागको अनुमानअनुसार आउँदाे जेठ १८ देखि असोज १४ गतेसम्मको चार महिनाको मनसुन सिजनमा देशका धेरैजसाे ठाउँमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश १ का तराईका भूभाग, बाग्मती प्रदेशका उत्तर पूर्वी भूभाग, गण्डकी प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका उत्तर पश्चिमी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तरी भूभागमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईँले गएकाे वर्षमा मनसुन अवधिभर ६ वटा स्टेशनमा वर्षाको रेकर्ड तोडिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चरिकोट, खैरहनीटार, बाजुरा, दमौली, खाटमार्फा र जोमसोम स्टेशनमा पहिलाको रेकर्डलाई ब्रेक गरेर मनसुन अवधिमा धेरै पानी परेकाे हाे । त्याे मनसुन वर्षाले ७९ जनाको ज्यान गएकाे उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।
त्यस्तै जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी उपमहानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले यो वर्ष पनि सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना रहेकाेले बेलैमा सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानको सूचना दिने आ–आफ्नो क्षेत्रको कार्ययोजना बनाउन पनि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले पूर्वानुमान गतिको समय जति नजिक हुन्छ त्यति नै पूर्वानुमानको विश्वसनियता धेरै हुने गरेको र एक हप्ताभन्दा लामो समयको मौसमको पूर्वानुमानमा विश्वसनियता कम हुँदै जाने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै वरिष्ठ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेलले नेपालमा मौसम पूर्वानुमान गर्ने छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र नहुँदा समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले विभागमा अनुसन्धानका लागि ‘स्किल ह्युमेन रिसर्च’ हरूको आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कोहलपुरको अध्यक्षमा रावत
‘जहाँ समस्या, त्यहाँ माओवादी’ अभियान
सल्यानमा बढ्दै बलात्कारका घटना
छ वर्षदेखि फरार अभियुक्त पक्राउ
गोल्ड कप शनिबारदेखि शुरु